Agaasimaha ciyaaraha Juventus oo ka hadlay sheeko cajiib ah ee la xiriirta heshiiskii uu Cristiano ku yimid Allianz Stadium – Gool FM
Agaasimaha ciyaaraha Juventus oo ka hadlay sheeko cajiib ah ee la xiriirta heshiiskii uu Cristiano ku yimid Allianz Stadium
(Juventus) 24 Dis 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu isaga jeclaa imaatinka magaalada Torino, waxaana sidaas xaqiijiyay wakiilkiisa Jorge Mendes.
Fabio Paratici ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay dhowr arimood uu qeyb ka yahay imaatinka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus.
“Waxaan wada fariisanay Jorge Mendes, si aan ugu wada hadalno heshiiska difaaca Joao Cancelo, wuxuuna xiligaas ii sheegay ma aamini doontid in Cristiano Ronaldo uu doonayo ku biirista kooxda Juventus”.
Fabio Paratici ayaa sheegay inuu ugu jawaab celiyay Jorge Mendes inaysan macquul ahayn in ay wada hadal la furtaan Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri: “Waxay noqon doontaa xaalad aad u adag”.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas kusii daray:
“Caruurtu waxay jecel yihiin ciyaartoyda waa weyn, taas ayaana ka dhigeysa inay ku riyoodaan, wiilkeyga ayaa doonayay inuu helo maaliyada Ronaldo”.
“Wuxuu i weydiiyay sababta aan heshiiska Cristiano loo dhameystiri Karin, waxaan u sheegay inaysan macquul ahayn”.
“Ugu dambeytii wuxuu wiilkeyga i xasuusiyay kadib marka aan dhameystirnay heshiiska Cristiano, hadalkeyga ku aadanaa in aysan macquul noqon Karin in la dhameystiro heshiiskan, waxaana awoodi waayay in wax jawaab ah aan u celiyo”.
“2019 waa sanadkii ay kooxda Tottenham ku guuleysan lahayd koobab” - Pochettino
Nabil Fekir oo si wayn lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqo mid ka mid ah muruq weynayaasha horyaalka La Liga